Oggolaanshaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka qaxootiga - Migrationsverket
Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – somaliska
Haddii lagu siiyay heerka qaxootiga waxaa lagu siinayaa oggolaanshaha daganaanshaha oo sadex sanno ah. Haddii ay kuu suurtogaleyso in aad taageertid shaqsigaaga goortii oggolaanshaha daganaanshaha ay dhacdo, waxaa lagu siin karaa ruqsada daganaanshaha joogtada ah.
Oggolaanshaha degenaanshaha ku meelgaarka ah waxay ku siisaa xaquuqda lagu noolaadoto oo lagaga shaqeeyo gudaha Sweden ilaa saddex sanno ah. Inta lagu jiro muddadaas waxaad leedahay isla xaquuqda ee daryeelka caafimaadka sida qofka haysto ogggolaanshaha daganaanshaha joogtada.
Sida casdeynta oggolaanshahaaga daganaanshaha waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha deganaanshaha. Kaarkan ma ahan waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka haddiiba oggolaanshaha ay shaqeyneyso, laakiin haddii aad u safartid meel baxsan Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynayo iyo kaarkaaga ruqsada daganaanshaha si markaas aad dib ugashid wadanka.
Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha kumeelgaarka waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshadda ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsida badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan ka soo qeybgalin Swedish ee Socdaalada fasalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangeliso diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa waraaqda aqoonsiga Swedish, taas oo muhiim kuu ah si aad, tusaale ahaan, akoon bangi u furatid.
Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa WakaaladaCanshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta waxaad u baahantahay in aad keentid kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah iyo aqoonsiga oo shaqeynaya. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeynayo in uu yahay koobi run ah ee asalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.
Qofka haysta sharciga deggenaanshaha ku meelgaar ka ah ee wadanka Iswiidhan sadex sanadood joogaya. Haddii aad haysato shaqo taas oo aad masruufkaaga kula soo bixikarto marka uu sharciga ku meelgaarka ahi kaa dhaco waxaad markaa haysataa fursad aad ku codsankartid sharciga deggenaanshaha joogtada ah.
Haddii adiga lagu siiyey sharciga deggenaanshaha ee qaxootiga isla markaana lagugu qiimeeyey inaad leedahay rajooyin aasaas fiican u leh in lagu siiyo sharciga dennenaanshaha oo muddo dheer ah markaa qoyskaagu waxay haystaan fursad ay ku codsadaan sharciga degenaanshaha si ay adiga kuugu yimaadaan wadanka Iswiidhan..
Akhri wax badan oo ku saabsan isku keenidaqoyska iyo joogteynta shuruuda
Oggolaanshaha deganaanshahaaga waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid macluumaad been ah marka aad codsaneysid Oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa ruqsada daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.
Ka akhriso warbixin intaa dheer sida sharciga loo dheeraysto (oo af ingiriis)